Kongoo: Mormii Kaabiilaa irratti taasifameen namoonni ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Kongoo: Mormii Kaabiilaa irratti taasifameen namoonni ajjeefaman
Humnootiin Nageenyaa Dimokraatawa Riippablika Koongoo mormii pirezidaantii biyyattii Jooseef Kaabilaa irratti waamameen yoo xinnaate namoota torba ajjeessu isaanii, dubbii himaan motummoota gamtoomanii beeksise.
Poolisiin ammoo namoonni sadi du'usaaniifi du'utii kanneen lamaa qaratamaa jiraachu hime.
Roggeeyyiin waldalee fi paartiiwwan mormitootaas hiriiricha deegaraniiru.
Haala waliigaltee waggaan dura taasifameen Mr Kaabilaan bara 2017tti taayitaaraa bu'u qabu ture.
Kunis erga yeroo lammaffaaf taayitaa qabatanii waggaa tokkodha. Filannoon isa bakka buusuuf taasifamuuf ture handa Muddee 2018tti akka turu taasifameera.
Roggeeyyiin kaatolikiis tajaajila Dilbataatiin booda hiriiraaf waama illeen, qondaltoonno Koongoo garuu hiriiricha dhorkaniiru.
Polisoonniis namoonni hiriiraaf akka walitti hinqabamne dhorkuuf waldaalee dabalatee rasaasa dhugaafi aara bochisaatti fayyadamaa turan.
Akka Gareen Mirga Maamoomaa jedheettis, namoonni lama karra waldaa irratti rasaasaan ajjeefaman.
Goodayyaa suuraa Mormiin farra Kaabilaas kan rogeeyyii waldaatiin deegarme ture.
Dubbii himtuun motummoota gamtoomanii Filooreensi Maarchaal akka jedhanitti, namoota Kinshaasaa keessatti ajjeefaman torban malees, mormitoonni biraas magaalaa Kaanaangaa jidduutti ajjeefamaniiru.
Manoonni 120 oliis hidhamaniiru, jette jirti.
Isheenis ''tarkaanfii humnaa namoota nageenyaan mormiif bahe irratti fudhatamee'' fi ''ittisa mirga bu'uuraafi bilisummaa humnoota nageenyaatiin taasifame,'' cimsuun mormitee jirti.
Goodayyaa suuraa Mr Kaabiilaa dhuma baraatti taayitaa gadi dhiisuu qabaatu ture
Mr Kaabilaa bara 2001 irraa kaasee taayitaarra turan. Innis erga marsaan lammaffaan isaa bara 2016tti dhumeen booda taayitaa irraa bu'u qabaatu turan. Garuu isa bakka buusuuf filannoon hingaggeefamne.
Filannoo gaggeessuu dhabuunis deegartoonni mormitootaa danbalii hiriiraa akka taasisaniif kakaaseera. Mormiiwwan motummaa irratti bara darbe keessa gaggeefamaniin namoonni hedduun ajjeefamu isaanii Motummaan gamtooman beeksiiseera.
Mariin motummaa ce'umsaa umuudhaaf jaarsummaa waldaa kaatolikiitiin eegalamees sababii motummaa fi mormitoonni akkaataa qodiinsa taayitaa irratti waliigalu dadhabaniifu adda citeera.